दुई लाखलाई रोजगारी दिइँदै, पहिलो प्राथमिकतामा को छन् ? « Salleri Khabar
दुई लाखलाई रोजगारी दिइँदै, पहिलो प्राथमिकतामा को छन् ?
५ मंसिर, काठमाडौँ – देशभरबाट छ लाख ८१ हजार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर ४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि त्यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका हुन् । यसमा आउँदो १५ गतेसम्म अझै बढी बेरोजगारको सङ्ख्या थपिने छ ।